Lalànan’ny Fifandraisandavitra: Neken’ny Fitsarana Tampony Meksikana Ny Fangitra Ara-Jeografika Sy Ny Fihazonana Ny Lahatahiry · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2016 6:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, Deutsch, Español
Sary: Pixabay nahazoana alàlana avy amin'ny Famoronana Sehatra Ho An'ny Daholobe .
Malahelo izahay fa tsy niraharaha ny fenitra iraisam-pirenena ny Ratsam-pitsarana Faharoa ao amin'ny Fitsarana Tampony tamin'ny fankatoavana ny fihazonana ny lahatahiry.
Namoaka didy ny Ratsam-pitsarana Faharoa ao amin'ny Fitsarana Tampony ao Meksika tamin'ny 4 May 2016 fa manaraka ny lalàmpanorenana ho an'ny orinasa fifandraisan-davitra ny fandraketana an-tsoratra ny fifandraisana manokan'ny mpiserasera ao aminy mandritra ny roa taona, araka ny voalazan'ny Lalànan'ny Fifandraisandavitra sy ny Haino Aman-Jery Federaly lany tamin'ny 2014. Manaiky ny fihazonana tsy ankanavaka ny lahatahiry sy mamela ny manam-pahefana hampiasa ny fangitra ara-jeografika amin'ny finday amin'ny fotoana rehetra tsy mila fanaraha-maso ara-pitsarana izany fanapahan-kevitra izany. Mametraka ny fiainana manokana sy ny fiarovana ny olom-pirenena rehetra tsy ho azo antoka izany araka ny Fikambanana Tsy Miankina Meksikana R3D : Tambajotran'ny Fiarovana Zo Nomerika.
Nandritra ireo volana voalohany tamin'ny 2014, maro ny hetsi-panoherana nokarakaraina manohitra ny andininy samihafa tamin'ny volavolan-dalàna talohan'ny nahalanian'ilay Lalànan'ny Fifandraisandavitra. Anisan'izany, ny diabe #NoMasPoderAlPoder (Tsy Mila Hery ho an'ny Mahery Intsony) sy ny rojon'olona nahatratra 7 km manerana ny renivohitra Meksikana, ary ny fanentanana nomerika #EPNvsInternet, izay niresaka momba ny filoha Meksikana Enrique Peña Nieto (EPN). Namoaka fanambarana ihany koa ny fikambanana Iraisam-pirenena, ny mpikatroka sy ny mpanoratra manohitra ny volavolan-dalànan'ny fifandraisandavitra. Nahomby ireo hetsi-panoherana satria noesorina tao amin'ny dikan'ny lalàna farany ny andininy nahatonga adihevitra be indrindra tamin'ilay volavolan-dalàna. Na izany aza, natao manankery ny Andininy faha 189 sy 190 amin'ny Lalànan'ny Fifandraisandavitra, izay ahitana fizarana miresaka fitazonana lahatahiry sy fijerena fangitra ara-jeografika amin'ny fotoana rehetra, antony mbola anohizan'ny R3D ny fanoherana ny lalàna.
Taorian'ny fanemorana ny adihevitra nandritra ny roa herinandro, notsipahin'ny Fitsarana nony farany ny didy tamin'ny 4 May 2014, mampanaiky ny andininy 189 sy 190 izany. Na izany aza, araka ny fanambarana an-gazetin’ny R3D, lavitra ny faran'ny ady ho fiarovana ny fiainana manokana:
[…] Hitory ny governemanta Meksikana eo anatrehan'ny rafitry ny Zon'Olombelona Iraisan'i Amerika izahay amin'ireo volana ho avy, ka ny tanjona lehibe dia ny hanafoana ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana sy ny filaminan'ny tsirairay sy ny Meksikana rehetra.
Raha nanamarika ny R3D fa tokony hambara ny antsipirihan'ny didim-pitsarana, dia hita fa ny fitsarana iraisam-pirenena, indrindra fa ny Fitsarana Iraisan'ny Amerikana Momba ny Zon'olombelona ​​no manana ny teny farany momba ity raharaha ity.